Hanafoana ny tazomoka ny Crispr | NewsMada
Hanafoana ny tazomoka ny Crispr
Olona 3,2 lavitrisa isan-taona no voan’ny tazo vokatry ny kaikitry ny moka. Efa hitsahatra izany noho ny voka-pikarohana goavana nataon’ny mpikaroka telo avy ao amin’ny Oniversiten’i Californie.
Namoaka fomba vaovao hiadiana amin’ny fifindran’ny tazo noho ny kaikitry ny moka izy ireo tamin’ny alalan’ny fanovana ny ADN-ny moka ihany.
Niara-niasa tamin’ny fanovana ny ADN ny moka izany i Anthony James sy Ethan Bier ary Valentino Gantz. Nampiasaina ny fitaovana antsoina hoe CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Fitaovana fanovana zena “gène” izy io. Novonoin’izy ireo tao anatiny ilay katsentsitra mahatonga ny tazo moka. Ny tena tsara aza dia miampita amin’ny taranak’ireo moka nandalo fanovana ireo ilay zena miady amin’ny tazo moka. Rehefa mahazo izany ny moka rehetra dia ho foana ny tazomoka
Na dia misy aza ny fanafody toy ny “Artémisinine” izay nampihena 60% ny taham-pahafatesanan’ny marary voan’ny tazomoka, mbola misy hatrany ireo karazana tazo vaovao mahery vaika mitady hiforona.
“Afaka hitondra antsika any amin’ny fahafoanan’ny tazomoka”, hoy Nora Besansky, manam-pahaizana momba ny fofotarazo ao amin’ny Oniversite Notre Dame ny fanovana ny zena. “Ny moka ihany no hanao ny asantsika sy handeha any amin’ny toerana tsy afaka alehantsika”, hoy izy
Dingana lehibe ity fomba vaovao fanovana zena atao hoe CRISPR ity na dia efa nisy hatramin’ny taona 1970 aza ny fanovana zena. Mora vidy kokoa izy raha mitaha amin’ny fomba hafa misy amin’izao fotoana izao.
Tsy amin’ny fanafoanana ny tazo moka ihany no tombontsoa azo amin’ny CRISPR fa eo ihany koa ny mety ahafahana mandresy indray andro any ny aretin’ny tarazo tahaka ny “Mucoviscidose”, ny “drépanocytose” ary ny “dystrophie musculaire.” Mety hiaro ny akondro tsy ho lany ritra ihany koa aza.
Arahin’ny manam-pahaizana momba siansa maso tsara na any amin’ny laboratoara na any amin’ny seminera mba hanaraka ny etika ny fanamboarana sy ny fampiasana ny teknolojia tahaka ny CRISPR.
Eo am-piandrasana ny fanatsarana io fomba vaovao io, manohy ny fanohanany ny ezaka atao momba ny ady amin’ny tazomoka i Etazonia amin’ny alalan’ny PMI. Mifototra kokoa amin’ny fampiasana fanafody mamono bibikely, amin’ny fizarana fanafody sy lay ny PMI. Ny tanjon’ny fandaharanasa iraisam-pirenena hiadiana amin’ny tazomoka dia ny hanafoana ny tazomoka amin’ny 2050.